Cima isikrini sekhompyuter yakho yeWindows kuWill | Iindaba zeGajethi
Amaqhinga ukucima isikrini sekhompyuter xa sifuna
Ungathini ngokuzithandela ukucima isikrini sakho sekhompyuter ukuze umamele umculo kuphela? Abantu abaninzi bahlala bephumeza olu hlobo lomsebenzi ngesenzo esilula kunye nesinye, oko kukuthi, ukuvala isiciko sekhompyuter yabo kwimeko apho ilaptop; Ngelishwa, imeko efanayo ayinakwenziwa kwikhompyuter yobuqu ye-desktop kuba ukubek'esweni kwayo akuhlanganiswanga kwi-CPU.
Ukucinga ukuba sifuna ukumamela umculo omnandi ogcinwe kwi-hard drive yethu, sinokuzama ukucima le khompyuter kukhetho lwamandla.
Ukucima ilaptop yekhompyuter yakho ngokuzithandela
Siza kuthatha ukuba sifuna ukwenza le mfuno kwiilaptop, le yenye yezona ndawo kulula ukuzenza; konke ekufuneka sikwenzile kukusondela «ukhetho lwamandla"kwaye emva koko, ishedyuli ukuze ikhompyutha ingacimi xa sivala isiciko sayo. Ngale nto, kuya kufuneka siqale ukubeka umculo esiwuthandayo, ukuvala isiciko kwaye siqhubeke nokonwabela umzuzu omnandi. Xa siphakamisa isiciko selaptop isikrini siza kuvula kwakhona.
1. Cima iLCD
Ngoku, ukuba ikhompyuter yethu yobuqu yidesktop, ubuqhetseba obukhankanywe apha ngasentla abuzukusebenza nangaliphi na ixesha. Into esinokuyenza kukusebenzisa isixhobo ekuthiwa "Cima iLCD" ephathekayo nesimahla ngaxeshanye.
Xa sifuna ukuba isikrini sicinywe kuya kufuneka sicofe kabini esiphumezayo; Konke okufuneka ukwenze kukuchukumisa naliphi na iqhosha okanye uhambise imouse ukubuyisela kwakhona isikrini. Ngelixa isikrini sicinyiwe ikhompyuter iya kuhlala ivuliwe kwaye ke, sinokuvumela umculo udlalwe ngawo onke amaxesha.
2. Ukubeka iliso ukuSebenza
Ngaphandle kwento yokuba esi sixhobo sichaze ngasentla sinokuba luncedo kakhulu kuye wonke umntu, into ebuyela umva kukuba kufuneka siyicofe kabini ukuze iscreen esokujonga sicime. Olunye uhlobo olungcono lusinika «Ukujonga ukuSebenza ngaphandle», kuba ngayo siya kuba nakho ukubanakho udweliso olunqumlayo ukusinceda sicime ukubeka esweni.
Ngokwokubanjwa esikubeke kwinxalenye ephezulu, ngesi sicelo sinakho Chaza naluphi na uhlobo lweendlela ezimfutshane iliso licime. Ukongeza koku, kunokwenzeka ukuba esi sixhobo sihamba kunye neWindows kwaye sihlala sisebenza kwi "tray task". Umbono onomdla ophakanyiswe ngumvelisi wawo ukhankanya ukuba umsebenzisi angenza inkqubo yokusebenza (fn) ukuze ukubek'esweni kucime, ebekwe kwicala lasekhohlo lekhibhodi.
3. Ukugcina ugcino lwaMandla (Ukubeka iliso)
Olu khetho lunokufana okuncinci nale siyikhankanyileyo ngasentla, kwaye yile nto apha siza kuba nethuba lokucwangcisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo eyalela esweni ukuba icime ngalo mzuzu.
Isinxibelelanisi sahlulwe sangamacandelo amabini ahlukeneyo, sinika ingqalelo kuphela kwisezantsi (Inkqubo). Kukho iinkalo ezimbini ekufuneka uzisebenzisile, oko kukuthi, udweliso lwebhodi yezitshixo ecimayo esweni kunye nenkqubo eyahlukileyo ngokupheleleyo endaweni yoko uyibuyisele kwakhona; Ukongeza unokuvula ibhokisi eya kukunceda ucime isikhuseli se-screensa njengoko inokuthi inyanzelise ukuba ilayite ivule.
Olunye uhlobo lokugqibela esiza kulukhankanya ngalo mzuzu lubizwa ngokuba yi "BlackTop", emiselweyo ngokusilelayo ngumvelisi wayo.
Ukuze iliso ukucima kuya kufuneka Sebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo «Ctrl + Alt + B», Ukucinezela naliphi na iqhosha okanye uhambise imouse ukuze iphinde ivule. Isixhobo siya kuhlala kunye ne-icon yayo kwi-Windows task tray, kwaye unokufikelela apho ukuba ufuna ukumisela nayiphi na iparameter.
Nganye kwezi zixhobo sizikhankanyileyo zingasetyenziswa nakweyiphi na inguqulelo yeWindows kwaye zisimahla, nazo ziyaphatheka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Amaqhinga ukucima isikrini sekhompyuter xa sifuna
Ungazifumana njani iividiyo, usetyenziso okanye okuninzi kwiwebhu?
Iindlela ezi-4 zokuFihla iDrive Drive okanye iSahlulo kwiWindows